I-YIHOO AN333-Phenol-yasimahla kunye neHydrolysis elungileyo yokuXhathisa iAntioxidant
Xa unxibelelwano lwemveli lwe-phenolic antioxidant kunye ne-nitrogen kunye negesi yeoksijini esemoyeni, ivelisa ulwakhiwo lwequinone. Isakhiwo seQinone sisizathu esingunobumba kunye nokubomvu. I-phosphite antioxidant ikwasetyenziswa ngokubanzi njenge-antioxidant encedisayo. Nangona kunjalo, kunye ...
Kwiminyaka yakutshanje, ngokumiliselwa kwemigaqo yomoya esemotweni, umgangatho wolawulo lweemoto kunye ne-VOC (inqanaba le-Organic Compounds) libe yinxalenye ebalulekileyo yovavanyo lomgangatho wemoto. I-VOC ngumyalelo weekhompawundi eziphilayo, ikakhulu ibhekisa kwikhabhathi yezithuthi kunye nemithwalo ...
UkuGqwesa kwePhenolic Antioxidant-An245 kunye neAn245dw
Iiphenol ezithintelweyo kunye ne-tert-butyl (X = tert-butyl) kunye ne-methyl (R = methyl CH3) kwindawo o yeqela le-phenolic hydroxyl ethintelweyo inokuwenza buthathaka umqobo wesithintelo seqela le-phenolic hydroxyl ethintelweyo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kunye nokukhawulezisa izinga lokuphendula ngokuchasene ne-antioxidant, yiyo loo nto yenza ...
IWebhusayithi eNtsha isungulwe!
Ngaphantsi kwemizamo edibeneyo yamacala onke, emva kweenyanga ezimbini zokuphinda-phinda, i-webhusayithi entsha ye-Yihoo Polymer Technology isungulwe ngempumelelo! Le webhusayithi intsha inika ukubalasela kokusebenza kweqonga elinye lenkampani phantsi kwesahlulo secandelo, kugxila ...